Dumarka Puntland arrimaha haweenka waxaan ka ahayn ma lagu aamini waayay? - BBC News Somali
Dumarka Puntland arrimaha haweenka waxaan ka ahayn ma lagu aamini waayay?
11 Febraayo 2019
Image caption Dumarka Puntland
Waxaa xalay saqdii dhexe lagu dhawaaqay golaha wasiiradda cusub ee maamulka Puntland kuwaasi oo ka kooban 18 wasiir, ku xigeenno iyo wasiiru dawlayaal, inkastoo dhowr wasiir ku xigeen iyo wsiir dowlayaal ay horay uga tirsanaayeen dowladdii Cabdiwali Gaas.
Wasiiradda oo u badan kuwo ku cusub saaxadda siyaasadda ayaa waxaan si weyn uga dhex muuqannin dumarka, wallow dhalinyara badan oo hay'adaha ka shaqeyn jirtay ay kamid noqdeeen maamulka cusub.
Dumarka wasiirada ee la magacaabay
Wasiirada la magacaabay ayaa waxaa dumar ka ah oo kaliya hal wasiir oo ah wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska iyo ku xigeenka wasaaraddaasi iyo labo wasiir ku xigeen.
Barlamaanka Puntland ayaa waxaa katirsan hal xildhibaan oo dumar ah, taasi oo muujineysa in matalaada dumarka ee dhanka siyaasadda ee dowladda cususb aysan muujinayn ifafaala wanaagsan oo dhanka dumarka.
Lahaanshaha sawirka Daljir
Image caption Caasha Gelle
Arrintan ayaa waxaa walaac ka muujiyay ururada u dhaq-dhaqaaqa haweenka, kuwaasi oo sheegay in dumarka marwalba aysan matalaad buuxda ka helin dowladda.
"Dhinaca walaac aan ka qabnay waxay tahay dhanka arrimaha dumarka, madaxweynaha wuxuu dhowr jeer ku celceliyay in uu kaalin fiican ka siinayo gabadhaha, balse waxaan dareensanahay daren awalba nagu jiray oo ahaa kii barlamaanka gabdhuhu ay hal gabar ka heleyn in uu wali taagan yahay". Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Caasha Gelle oo u dhaq-dhaqaaqda arrimaha dumarka.
Caash ayaa sidoo kale sheegtay in culeysadaasi marwalba ay dareensanaayeen oo aysan dhamaaneyn ilaa la gaaro doorasha qof iyo cod ah, waxaana ay intaa raacisay inay jirto wasaarad haween oo gaar looga dhigay gabdhaha.
Caasha ayaa intaa ku dartay inay ku haminayeen in gabdhaha lasiin doono wasaradaha kale, maadaama ay leeyihiin xirfaddii iyo aqoontii looga bahnaa, balse wasaaradda haweenka guri looga dhigay dumarka.
Maamulka Puntland aya kamid ah kuwa ugu liita deegaanad Soomaalida, marka laga hadlayo matalaada dumarka ee dhanka siyaasadda, waxaana magacaabista golaha cusub ee wasiirada oo dumar badan aysan ka muuqanin ay noqoneysaa si ambaqaadida dhaqankii soo jireenka.